Barcelona, Juventus, Chelsea iyo Dortmund oo wada badiyey tartanka Champions League… – Hagaag.com
Barcelona, Juventus, Chelsea iyo Dortmund oo wada badiyey tartanka Champions League…
Barcelona ayaa sii xoojisay hogaankooda Group-ka G ee heerka Groupyada UEFA Champions League, kadib guushii adkayd ee ay ka gaadhay Dynamo Kiev, Ukraine, wareega saddexaad ee Group-ka, sidoo kale waxaa guul fudud gaartay Juventus oo 4-1 uga badisay kooxda Ferencvaros ee Hungary.
Barcelona ayaa dhibcaheeda ka dhigtay 9 dhibcood sidaasna hogaanka group-kooda ku haysa iyadoo 3 dhibic ka horeyso Juventus, halka Dynamo Kiev iyo Ferencvaros ay ku jiraan boosaska saddexaad iyo afraad iyagoo leh min dhibic.
Guruub F, Borussia Dortmund ayaa la wareegtay hogaanka guruubka kadib markii ay 3-0 uga badisay kooxda Club Brugge ee reer Belgium. Dhinaca kale isla group-kan kooxda Lazio ayaa barbaro min 1-1 la gashay kooxda Zenit ee Russia.
Dortmund ayaa dhibcaheeda kor ugu qaaday oo ka dhigtay 6 dhibcood, waxayna ku jirtaa kaalinta 1-aad ee Group-ka, hal dhibic ayey ka hooseysaa Lazio, Club Brugge ayaa ku jirta kaalinta seddexaad iyadoo leh 4 dhibcood, halka Zenit ay leedahay hal dhibic kuna jirto kaalinta afraad.
Guruubka E, Chelsea ayaa ku garaacday kooxda Faransiiska ee Rennes 3 gool oo ay kala dhaliyeen Timo Werner (10 iyo 41 labo rigoore) iyo Tammy Abraham (50).
Isla guruubka, Sevilla ayaa 3-2 ku garaacday kooxda reer Russia ee Krasnodar. Krasnodar ayaa ku hormartay labo gool oo ay kala dhaliyeen Mahmoud Silmanov (10) iyo Marcus Berg (21 rigoore), laakiin kooxda Andalusian ayaa miiska u rogtay iyagoo dhaliyay seddexleey Ivan Rakitic (42) iyo Yusef al-Nusiri oo bedel ku soo galay (69 iyo 72).
Chelsea ayaa sare u qaaday dhibcaheeda oo geysay 7 dhibcood oo ay ku hogaamineyso guruubka, waxaa ku xigay Seville oo u dhaxeysa keliya farqiga goolasha, halka Krasnodar ay ku dhegtay dhibic booska seddexaad, Rennes ayaana ugu dambeysa iyadoo leh hal dhibic
Guruub H, Leipzig ayaa miiska la gedisay Paris Saint-Germain waxayna uga badisay 2-1, iyadoo sidoo kale guul lama filaan ah ay gaartay kooxda Basaksehir ee reer Turkey oo garaacday kooxda Manchester United 2-1.
Leipzig ayaa ka soo kabatay naxdintii ka soo gaadhay guuldaradii 5-0 ee ku xaaqday Manchester United ciyaartii ugu dambeeysay.